That's so good, right?: The Wet Walk
ကျွန်တော့်နာမည်က သူရိန်၊ အသက်က ၁၉နှစ်၊ စိတ်လှုပ်ရှားရင်ဖိုရတာကိုနှစ်သက်သူတစ်ယောက်၊ပြီးတော့ တော်တော်တန်တန်ကို အရေးပေးတာခံချင်သူပဲဗျ ပြောပြရရင်။ ကျွန်တော်ကအမြဲလိုလို သွေးဆူမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေကိုပဲ ကြံစည်လုပ်ကိုင်မိနေတတ်တယ်ဗျ။ အာရုံကြောတွေ အသားကုန်အားကောင်းပြီး ကျွန်တော့်ငပဲ ဘောင်းဘီထဲက ခုန်ထွက်မတတ်ဖြစ်နေစေတာမျိုးတွေက နမူနာပေါ့။ တစ်ရက် ကျောင်းဝင်းထဲက ကွန်ပျူတာခန်းမှာ အင်တာနက်သုံးရင်း ဟိုသည်မွှေလိုက်တာ ခပ်ဟော့တ် ဟော့်ငနဲတွေ သူတို့ငပဲတွေကို မဖုံးကွယ်ဘဲ လျှောက်သွားနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေတင်ထားတဲ့ website တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အသက်အရွယ်ဝန်းကျင် ဒီကောလိပ်ကျောင်းသားအရွယ်တွေက ခပ်လှလှ ရေကူးသမားခန္ဓာကိုယ်တွေ သို့မဟုတ် ကြွက်သားအမြှောင်းမြှောင်းခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင် တွေဖြစ်ပြီး သူတို့ဘောင်းဘီတွေကို ခပ်လျောလျော ချဝတ်ထားကြတာ တင်သားဆိုင်တွေရယ် - ငပဲတွေကိုတောင် ချွတ်ပြစရာမလို အောင်မြင်နိုင်သဗျ။ ပြီးတော့နော် နေ့ခင်းအလင်းရောင်ထင်းထင်းထဲမှာ သိလား။ တော်တော် လန်းတာပဲလို့ ကျွန်တော်တွေးထင်မိသလို ကျွန်တော့်ငပဲဟာလည်း ရုတ်ခြည်းဆိုသလို မာတောင့်လာပါတယ်။
အဲဒါအရေးပေးခံချင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါပဲ။ သို့မဟုတ် ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားက ၇လက်မနီးပါးရှိတဲ့ ဆိုဒ်မှီဂိုက်မှီ ကြီးကြီးကို တစ်ယောက်ယောက် အဲ တစ်ဦးဦးကို ဟောဒီမှာဆိုပြီး ပွတ်သပ်ပြချင်တဲ့ ဖိုးပြချင်တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်မိခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော့် စာကြည့်စားပွဲမှာထိုင်နေရာက ထလိုက်တယ်။ ပေါင်အရေပြားနှင့် တစ်ထပ်တည်းနည်းပါး ခပ်ပါးပါး အားကစားဘောင်းဘီတိုတစ်ထည်လို ပေါင်လည်လောက်ရှိတဲ့ အဖြူရောင် ထရပ် ဘောင်းဘီတစ်ထည်(a white track pants) ကို အောက်ခံဘောင်းဘီမပါဘဲ ကျွန်တော် ၀တ်လိုက်ပါတယ်။ မပျော့မမာ ငပဲရဲ့ထိပ်ဝမှာ အရေကြည်နည်းနည်းစို့နေတာကို ဘောင်းဘီခွဆုံကိုကြည့်များကြည့်မိရင် ရှင်းရှင်းလင်း လင်းကိုမြင်နိုင်သလိုပဲဗျ။
ကျွန်တော် သစ်ရွက်ကလေးတွေလေတိုက်လို့ လှုပ်နေသလိုမျိုး တဖျတ်ဖျတ်ကိုဖြစ်နေတာ။ ကျွန်တော် လူတွေကြားထဲမှာ ဘယ်တော့မှ -ွင်းမထုဖူးဘူး။ ယားလို့တောင်မပွတ်သပ်မကုတ်ခြစ်ဖူးဘူး။ ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ လမ်းတစ်ခုလုံးကလူတွေတိုင်း စူးစမ်းကြည့်နဲ့ ကြည့်နေကြတာကိုသိနေတယ်။ ကောင်းတယ်…လူတွေခပ်များများစိုက်ကြည့်လေပိုကောင်းလေပဲ။ တစ်ယောက်ယောက်က တစ်ခုခုလှမ်း ပြောလိုက်မှာကို ကြောက်မိထိတ်လန့်မိသလိုဖြစ်ပေမဲ့ တစ်ယောက်မှ ဘာမှမပြောကြပါဘူး။ တစ်ချို့ကတော့ကြည့်ပြီးရယ်သွားကြတယ်။ တစ်ချို့က ကျွန်တော့်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးသူတို့ဘေးကလူတွေကို ခပ်တိုးတိုးစကားဆိုကြတယ်။ ဘယ်သူမှ ဘာမှတိုက်ရိုက် မပြောကြဘူး။ အဲဒါပဲ….အဲဒါပဲ ကျွန်တော်မြင်တွေ့ခံစားချင်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေပဲ။
ကျွန်တော် အဆောက်အဦးတွေကိုဖြတ်ကျော် ကျောင်းနယ်နိမိတ်ကနေ ဝေးကွာလာအောင် လျှောက်လှမ်းလာတုန်း ကျွန်တော့်ငပဲက တရမ်းရမ်း။ တစ်ယောက်မှ ဘာစကားမှ မပြောကြသေးဘူး။ နှစ်ဘလောက် လောက်လျှောက်လာလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ငပဲဟာ အမြှောက်မချိန်တော့ပဲ ပြန်ပျော့သွားတယ်။ ‘တောက်’ ဘာကိစ္စပြန်ပျော့သွားရတယ် မသိဘူးဗျာ မကြာခင် လူတွေ ကျွန်တော့်ကိုသတိထားမိတော့မှာ သေချာတယ်။ တစ်စုံတစ်ယောက်ယောက်က တစ်ခုခုတော့ပြောနိုင်တယ်လေ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ထင့်နေတာက ရဲပတ္တရောင်လှည့်တာနဲ့တိုးပြီး ကျွန်တော့်ကို သတိပေးစာပေးသွားနိုင်တာကိုလေ။ ထားပါ ဒီလိုဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကို သူတို့ ဂရုစိုက်မိတယ် သတိပြုမိတယ်ဆိုတာ မငြင်းနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားမှာ။
ဘောင်းဘီက ရှုံ့ကြိုးကို မသိမသာလျော့လိုက်တာ ဘောင်းဘီက တဖြည်းဖြည်းလျောကျသွားတာများ တင်တစ်ဝက်လောက်ထိပြပြီးသား ကိုဖြစ်ရော။ ပြီးတော့ရှေ့ဘက်ဆီးစပ်က မွှေးပွတွေနှင့် ပျော့နေတဲ့ငပဲတစ်ဝက်လောက်ကိုတောင်လှစ်ပြနေတာပြူတစ်ပြူတစ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့ အသားကုန် အားရပါးရ ငယ်သံပါအောင်အော်ဟစ်ပြီး ကျေနပ်နေလိုက်တာ ငါအတော်ဟုတ်လာပြီပေါ့နော်။
ပူနွေးသာယာတဲ့ နွေရာသီလေးပါပဲ လေညှင်းလေးတွေသဲ့သဲ့တိုက်လို့။ မပေါ့်တပေါ်ဖြစ်လိုက် ဖုံးသွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်တင်သားဆိုင်တွေနဲ့ ငပဲတွေကိုတောင် ကလိကလိနဲ့လာလုပ်နေသေးတယ်။ ဘာကြောင့်ဓာတ်ပုံထဲကငနဲတွေ ဒီလိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိလာသလိုလိုပဲထင်မိပါရဲ့။ အနီးအနားဝန်းကျင်တစ်ဝိုက် တစ်နာရီလောက် အချိန်ဖြုန်းလမ်းလျှောက်နေပြီးနောက် လူ၂၀လောက်ထိုင်နေတဲ့နေရာကို ဖြတ်လျှောက်လာရင်း တစ်ယောက်ယောက်ကများ ‘ဟေ့’ လို့အော်လိုက်ဦးမလား မျှော်လင့်မိသေးတယ်။ ကြားဖူးနေကျ စူးရှရှလေချွန်လိုက်တာ၊ လက်ညှိုးထိုးပြပြီး တီးတိုးစကားပြောကြတာကိုပဲ ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ဆက်ဆံခံနေရတာဆိုတော့ ကျွန်တော်ဖြင့် စိတ်တောင်ပျက်လာပြီ။ “ဘုရားသခင်၊ ငါဘာလုပ်နေခဲ့လဲ?” လို့ပဲတွေးမိပါတယ်။
ကျွန်တော် သိပ်မဝေးတဲ့ စတိုးဆိုင်တစ်ခုကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာ soda တစ်ဘူးလောက်ဆွဲလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တစ်စုံတစ်ယောက် သတိထားဂရုပြုမှုရဖို့ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ခရီးကို ဆက်လျှောက်လိုက်ပါတယ်။ အရောင်းစာရေးမက ဘာမှတော့မပြောဘူး ကျွန်တော့်မျက်နှာကိုသေချာစိုက်ကြည့်နေပြီး ကျွန်တော်ဆိုင်ထဲကထွက်တော့မှ တခစ်ခစ်ရယ်နေလေရဲ့။
စတိုးဆိုင်အပြင်ဘက်ရောက်တော့ တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတာ သတိပြုမိလိုက်ရတယ်။ ဒီတော့ ခပ်လျော့လျော့ ဘောင်းဘီကို ဆွဲတင်ဖို့မကြိုးစားဘဲ လမ်းအတိုင်းခပ်လှုပ်လှုပ်လျောက်သွားလိုက်တာပေါ့နော်။ အခုက တကယ့် မွန်းတည့်ချိန်ကြီး။ နေကလည်းတကယ့်ကိုပူနေတာ။ soda ကလည်းသောက်လို့ကုန်ပြီ။ လူတွေ သတိပြုမိပြီး တစ်ခုခုအပြောခံရဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ အိုင်ဒီယာလည်း ဘာမှမရှိတော့။အဲဒီအတွေးကြီးက ကမ်းခြေကိုရေလှိုင်းတွေ ရိုက်ခတ်နေသလို တရိပ်ရိပ်။ Shit!! ကျွန်တော် သေးပေါက်ချင်လာပြီ၊ သေး….ပေါက်ချင်လာပြီ။
ကျွန်တော့်အိမ်နှင့်ဆို တစ်မိုင်ကျော်လောက်ဝေးလာပြီ။ အင်း… တစ်ခုခုဆက်လှုပ်ရှားဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကိုယ့်ဘောင်းဘီ ထဲကို သေးပေါက်ချမိတော့မယ်။ လမ်းမကြီးတလျှောက်နှင့် ပလက်ဖောင်းတွေအကုန် လူတွေပြည့်လာပြီပဲ။ သင်တန်းချိန်တွေပြီး၊ အလုပ်တွေ ဆင်းပြီးဆိုတော့ လူတွေ အပြင်ထွက်လာပြီပေါ့။ ကျွန်တော် လမ်းဖြတ်ကူးဖို့ မျဉ်းကျားကိုအရောက် လမ်းကူးဖို့ခလုပ်ကို အနှိပ် ဘောင်းဘီဖြူထဲကို အ၀ါရောင်မြစ်တစ်စင်း စတင်စီးဆင်းစေလိုက်တယ်။ အဲဒီလို စီးဆင်းစေရဲ့ တန်းလန်းနဲ့ ဆက်သွားလိုက်တာ နောက်ဆုံးတော့ တစ်ယောက်သော ငနဲတစ်ပွေက အလန့်တကြား ကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီး လက်ညှိုးထိုးကာ ပါးစပ်ကြီးဟလို့ပေါ့နော်။
ကိုယ့်ဖာသာကို တစ်ချက်ငုံ့ကြည့်လိုက်ပြီး ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ ဂရုစိုက် သတိထားမိတာခံရမယ့်လုပ်ရပ်ကို လုပ်နိုင်လိုက်ပြီလို့ အားရ၀မ်းသာဖြစ်ရပါတယ်။ အဖြူရောင် ထရပ်ဘောင်းဘီ(track pants)ဟာ ရွှဲစိုနေပြီး အ၀ါရောင်တွေစွန်းထင်းနေသလိုဖြစ်နေပြီ။ ပြီးတော့ အထဲကပစ္စည်းကို ဖောက်ထွင်းပြီးကောင်းကောင်းကိုမြင်နိုင်နေတာလေ….ဟီး။ ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ ကောက်ကြောင်းကို အတိုင်းသား ဗြောင်နည်းပါးကြည့်လို့ရမယ်။
၀ှူး…….ရုတ်တရက်ဆိုသလို ကျွန်တော့်ငပဲက ခေါင်းထောင်ထလာတယ်ဗျ။ ‘သောက်ရူး…..ကိုယ့်ဖာသာကြည့်ဦး သေးပေါက်ချ သေး…ဟေ့…ဟေ့ကောင် မင်းသောက်ရူးကောင်လား အရူး’ တတ်နိုင်သမျှ အဖြေးဆုံး ခြေလှမ်းတွေနှင့်လမ်းကို ကျွန်တော်ဖြတ်ကူး လာချိန် ကားတိုင်းလိုလို ဟွန်းတီးသလို၊ တွေ့တဲ့လူတိုင်းက ရှုံ့ချအော်ဟစ်ဆဲရေးကြပါတယ်။
ဟားဟား…..ကျွန်တော်ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း ပန်းတိုင်ရောက်ပြီ။ ရွှဲစိုနေတဲ့ဘောင်းဘီနှင့်အတူ လမ်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုရောက်တော့ ဘောင်းဘီထဲက ငပဲက တော်တော့်ကိုမာနေပြီဗျ။ဘောင်းဘီထဲမှာတင် ဖြူပျစ်ပျစ်အရည်တွေ ပန်းထုတ်မိတော့မတတ်ပဲ။ ငပဲက မာတောင့်နေတာမှာ ဘောင်းဘီသားကစိုရွှဲနေတော့ တုန့်ဆိုင်းထားသလိုဖြစ်ပြီး ဘောင်းဘီကပဲ အဆမတန်လေးနေသလို ခံစားရပါတယ်။ အဲဒါက အကြီးမားဆုံး တွန်းထိုးရုန်းကန်နေရသလို အမြဲပဲ။
ထင်မြင်ချက်အမျိုးမျိုးတိုင်း၊ စော်ကားမှုတိုင်း၊ ငေးကြည့်မှုတိုင်း၊ တတီတီ ဆူညံနေတဲ့ ဟွန်းသံတွေကို စုပ်ယူခံစားရရင်း ကျွန်တော့်အိမ် အပြန်လမ်းကို ခပ်သွက်သွက်လှမ်းပါတယ် ခြေလှမ်းအစုံကိုပေါ့နော်။ ကျွန်တော်…ကျွန်တော် ပီတိတွေ တလှိမ့်လှိမ့်တက်နေသလို ခံစားရပါတယ်။ ဒါတကယ့် အံ့ဖွယ်သုတပါပဲ။ အိမ်ရောက်ရင် အချိန်မဆိုင်းဘဲ ငပဲကို ဂုတ်ကကိုင်ကာ ခပ်သွက်သွက်ကစားမှ ဒီအချိန်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ အခန်းတံခါးကို သော့ဖွင့် ပထမခြေလှမ်းစတင်လိုက်တာနှင့် ခါးမှာဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပူနွေးနွေးကြမ်းပြင်မှာ သူ့အလိုလို ခြောက်သွေ့လိမ့်မပေါ့။ ကျွန်တော့်အခန်းဖော်နှင့် ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ အိမ်ထဲ -ွင်းထုနေပြီ…..အာ….ရှီး။ ။
ကျွန်တော် ၀ရန်တာနဲ့ခြားထားတဲ့ မှန်နားကခုံမှာထိုင်ပြီး အစွမ်းကုန်ရှည်လျားနေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို အားရပါးရလက်နဲ့ကစားတာများ စက်သေနတ်ကို ခလုပ်ဖိဆွဲထားသလိုဖြစ်နေတယ် ထင်ပါ့။ နောက်ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကာ မှန်ချပ်တွေဆီ အားရပါးရ ပန်းထုတ်လိုက်တယ် ဖြူပျစ်သော အရည်များကို။ ဘယ်လိုဟာက ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းလဲ ကျွန်တော်မသိတော့ဘူး။ အခန်းဖော် အချိန်မရွေးပြန်လာပြီး လုပ်ကိုင်နေတာတွေကို မိသွားနိုင်တယ် သို့မဟုတ် အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက် ဒါမှမဟုတ် ဖြတ်သွားတဲ့ တစ်ယောက်ယောက် ကျွန်တော့်ကိုမြင်သွားပြီး ရဲခေါ်နိုင်တာပဲ….ဟီး။
ထားပါ….ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ့်ကို အကောင်းဆုံးရက်တစ်ရက်ပဲ ဒီနေ့ဟာ။ ပြီးတော့ အာသာဖြေမှုလုပ်ခဲ့သမျှ အကောင်းဆုံး ကျေနပ်မှု အပြည့်အရဆုံးပါပဲလေ။
Alex Aung (1 May 2013)